जनतापाटी डेस्क सोमवार, जेठ १३, २०७६, ०९:१७:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । गर्भवती महिला सुत्केरी हुने समय नजिक पुगेपछि चिन्तित हुन्छिन् । कतै पेटमा दुई वा त्यो भन्दा बढी अर्थात जुम्ल्याहा बच्चा त छैनन् ? यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ, थाहा नपाउनु भन्ने होईन् ।
गर्भवती महिलाले पेटमा कति पो बच्चा छन् भनेर चिन्तित हुनु स्वभाविकै पनि हो, किनभने जन्माउँदा देखी पालन पोषण सम्म जटिलता हुन्छ । गर्भवती महिलामा देखिने संकेतहरुबाट पेटमा दुई वा त्यो भन्दा बढी बच्चा भएको थाहा पाउन सकिन्छ । त्यस्ता केही संकेतहरु हामीले तल उल्लेख गरेका छौँ ।
१. एचसीली तह उच्च
गर्भवती महिलामा ह्युमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन अर्थात् एचसीजीको मात्रा बढी भएमा दुई वा बढी सन्तानको लक्षण हो । गर्भवती महिलाको रगत वा पिसाबमा गर्भ रहनु भन्दा १० दिन अगाडि एचसीजी नाम गरेको हर्मन सजिलै देखिन्छ । यसको मात्रा तीव्र दरमा बढ्छ । १० औ सातामा यो तह उच्च बिन्दुमा पुग्छ । जुम्ल्याहाले पनि उच्च तहको एचसीजी उत्पादन गर्न सक्छन् । तर, पेटमा एउटा मात्र बच्चा हुँदा भने यो तह न्युन हुन्छ । तसर्थ, एचसीजीको तह मापन गरेर पनि जुम्ल्याहा वा एउटा बच्चा के छ भन्ने पहिचान गर्न सकिन्छ ।
२. मुटुको धड्कनमा बृद्धि
आवाजको छाल पहिचान गर्ने डोपलर प्रणालीले भ्रुणको मुटुको धड्कन (१२ साता सम्म) बढेको थाहा हुन्छ । एक अनुभवी चिकत्सक वा महिला सुसारेले एकभन्दा बढी मुटुको धड्कन थाहा पाउँछन्, जसको अर्थ दुई भन्दा बढी बच्चा गर्भमा रहेको संकेत हो । तर, कतिपय अवस्थामा यो आवाजले चिकित्सक र सुसारे महिला पनि झक्किन सक्छन् । किनकी दोस्रो धड्कन पृष्ठभूमिको आवाज वा आमाको दुर्लभ धड्कन पनि हुन सक्छ ।
३. अत्याधिक ‘मर्निङ सिकनेस’
करिब ५० प्रतिशत महिला गर्भवती भएपछि विहान वाक वाँकी आउने वा घुमाउने समस्याबाट पीडित हुन्छन् । झन् दुई ओटा शिशु भएका आमामा त यस्तो समस्या नहुने कुरै भएन । मल्टिपल प्रिगनेन्सी वा जुम्ल्याहा बच्चा भएका आमामा अत्याधिक मर्निङ सिकनेस भएका बारम्बार गरिएका सर्वेक्षणहरुले पनि दर्शाएका छन् ।
४. तौलमा अस्वभाविक बृद्धि
जुम्ल्याहा बच्चाका कारण आमाको तौलमा बृद्धि हुन्छ । १२ सातापछि अस्वभाविक रुपमा तौल बढेमा यस्तो हेक्का राख्न सकिन्छ । महिलाको उचाई, शरिरको प्रवृत्ति र भ्रुणको आकारका आधारमा तौलको बारेमा जानकारी हुन्छ ।
५. परीक्षणमा अस्वभाविक एएफपीको मात्रा
गर्भमा जुम्ल्याहा बच्चा भएमा अल्फाफोटो प्रोटिन बढी हुन्छ । गर्भवती महिलामा १३ सातादेखि २७ सातासम्म एएफपी परीक्षण हुन्छ। यस परीक्षण निश्चित ‘वर्थ डिफेक्ट’ (शिुशुको अपाङ्गपन)को खतरा पहिचान गर्न समेत प्रयोग गरिन्छ । ‘टिवन प्रिगनेन्सी’ले अस्वभाविक रुपमा उच्च वा ‘पोजेटिभ’ परिणाम देखाउछ । यस परीक्षणपछि चिकित्सकलाई सामान्यतया बच्चाको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहयोग गर्छ ।
६. बारम्बार भ्रुणको चाल महशुस हुनु
कोखमा बच्चाको अनुभव वा भ्रुणको चाल गर्भधारणको निकै उत्तेजक र उत्साहपूर्ण अवस्था हो । मल्टिपल प्रिगनेन्सीमा भ्रुणको चाल अस्वभाविक रुपमा तीब्र हुन्छ । अन्य गर्भवती महिलाको तुलनामा यस्तो लक्षण अलि छिटो थाहा हुने केही चिकित्सकहरुको दाबी छ । तथापी, यस विषयमा उनीहरुबीच नै मतभेद देखिन्छ ।
७. अत्यधिक कमजोरी पन अनुभव हुनु
कमजोरीपन मल्टिपल प्रिगनेन्सीमा देखिने सबैभन्दा साझा समस्या हो । झुमलिरहने, काम गर्न मन नलाग्ने, जतिखेर पनि थकान मात्रै लाग्ने वा आफ्नो दैनिकी नै प्रभावित हुने लक्षण ट्विन मल्टिपलका संकेत हुन् । त्यसो त एउटा मात्र भ्रुण हुँदा पनि आमाले त्यस्तो अनुभव गर्छिन् तर, मल्टिपल प्रिगनेन्सीमा यस्तो लक्षण अलि बढी नै देखिन्छ । पीडा, चिन्ता, काम तनाबले पनि यस्तो कमजोरी बनाउँछ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रदेश ३ का कर्मचारीलाई खुशीको खबरः एक महिनाको थप तलब पाउने सोमवार, असार २, २०७६, १४:०५:००
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : आगामी वर्ष इतिहासकै तीब्र विकासको वर्ष आगामी ४ वर्षमा मध्येपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्ग, काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग र हुलाकी लोकमार्ग सम्पन्न गरिने शुक्रवार, बैशाख २०, २०७६, २२:३८:००
अस्ट्रेलियामा नर्सिङ पढाइ, नेपाल फर्किएर लुगा धुने काम मंगलवार, असार ३, २०७६, १४:११:००